ISBEDELKA WADAJIRKA AH
Soomaali - Back to school
MPS Home > Back to School > Soomaali - Back to school
Waan ku faraxsannahay inaan ku soo dhaweyno ardaydeena dugsiga!
ISBEDELKA WADAJIRKA AH | #MPSNOW
Waxaa sharaf noo ah inaan sare u qaadno madaxdeenna mustaqbal isla markaana aan u wada dhaqaaqno xagga isbedelka.
WAXBARASHO LOO DHAN YAHAY | BULSHO TAAGEERTA | WAXBARASHO WAARTA
Qoysas badan ayaa ku biiraya bulshooyinka iskuullada cusub sannadkan. Isbeddelada ka socda MPS ee sanadkan waa in la hubiyo in si wanaagsan loo dhammeeyo waxbarashada dhammaan ardayda, iyadoo aan loo eegin jinsiyadooda, dhaqankooda ama nambarkooda. Ku darsigaaga, waxaan ku dadaalaynaa inaan xirno farqiga u dhexeeya guusha annaga oo dhiseyno naxariis, badbaado, jawaab celin iyo boosas badan oo loo siman yahay si wax loogu barto dhammaan ardayda. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad nala xisaabtantaan qiyamkan.
Ardayda ka qalin jabisay MPS waxay ka kooban yihiin dhismaha magaaladeena waxaanan ka shaqeyneynaa sidii loo hubin lahaa in dhammaan iskuulada, ardayda iyo qoysaska ku nool degmada oo dhan ay helaan ilo isku dheelitiran. Waxaan ku faraxsanahay inaan kula shaqeyno dhismaha MPS xoog leh.
ILAALINTA ARDAYDA IYO SHAQAALAHA
Hubi bogga MPS iyo shabakadda dugsigaaga si joogto ah Ogosto si aad u ogaato macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan sida MPS ay wax uga qabato baahiyaha caafimaadka iyo amniga ee la xiriira COVID-19. MPS waxay sii waddaa inay si dhow ula socoto xogta heerka kiisaska COVID-19 case rate data waxayna la tashataa saraakiisha caafimaadka ee heer degmo iyo gobol. EMaalin kasta dugsiga ka hor, qoysaska waa inay hubiyaan inay fiiriyaan haddii ardaygoodu uu leeyahay astaamo COVID-19 Qalabka Baaritaanka Caafimaadka Guriga ee Maalinlaha ah,
WEWE AREARE BACKBACK IN WAXAAN DIB UGU SOO NOQONAYNAA FASALADII DHOWAAN!
Waa sidaan toddobada dariiqo ee ardayda iyo qoysaska ay isugu diyaariyaan:
KU SOO CELI TIKNIYOOLAJIYADAADA MPS DUGSIGA MAALINTA UGU HOREYSA.
Haddii ardaygaagu uu dhiganayey MPS sanadkii hore, waa inay la yimaadaan dhammaan teknolojiyadda degmadu ay horay u siisay maalinta ugu horreysa dugsiga. Tiknoolajiyadaas waxaa ka mid ah MPS Chromebooks, ipads, qalabka wax lagu rakibo, iyo goobaha internetka ee moobiilku ku kululaado Ardayda cusub ayaa loo qoondeyn doonaa aalado ka taageera waxbarashadooda. Wixii taageero ah ee ku saabsan arrimaha farsamada ee qalabka MPS, waxaad wici kartaa Xarunta Adeegga IT-da 612.668.0088, Isniinta illaa Jimcaha laga bilaabo 7:30 a.m.-4 p.m.
CUSBOONAYSII TALLAALADA KA HOR INTAAN DUGSIGU BILAABMIN.
Haddii ilmahaagu u baahan yahay tallaal, wac khadka Adeegyada Caafimaadka lambarka 612.668.0850. MPS waxay kula talinaysaa dhamaan ardayda iyo qoysaska uqalma inay
helaan talaalka COVID-19. Waxaad ka heli kartaa tallaal bilaash ah mn.gov/covid19.
BUUXI FOOMKA FAA’IIDOOYINKA WAXBARSHADA SI LOO KORDHIYO MAALGELINTA DUGSIGAAGA.
Foomka ku buuxi khadka tooska ah ee bit.ly/ BenefitsApplication ama ka raadso codsiga arji dugsigaaga. Dalbashada Faa’iidooyinka Waxabarasho waxay u keentaa dugsiyada maalgelin muhiim ah - in ka badan $ 100 milyan sannad kasta. Himiladayadu waa 100% dhammaystirka codsiyada si loo hubiyo in dugsi walba uu helo maalgelinta ugu badan ee suurtogalka ah; qoysaska dhammaan dakhliyada waa inay buuxiyaan foomka.
WAX BADAN KA BARO DUGSIGAAGA.
Qoysas badan ayaa loo badalayaa iskuullada cusub sannadkan. Hubso inaad taqaanid adooaad ka eegan kartid websaydhka dugsigaaga macluumaad muhiim ah sida waqtiyada bilowga iyo dhammaadka iyo sahayda lagu soo dhaweynayo inaad keento. Sidoo kale, iska hubi inaad dhigto taariikhi muhiim u ah degmada iyo dugsiga kalandarka qoyskaaga si aad ugu sii joogi karto waxyaabaha ugu sarreeya, nasashooyinka iyo shirarka
HUBSO IN ISKUULKA ARDAYGAAGU HAYSTO MACLUUMAADKAAGA XIRIIRKA EE HADDA JIRA.
Weydii xoghayaha dugsiga haddii aadan hubin. Macluumaadka xiriirka ee ugu dambeeyay wuxuu muhiim u yahay helitaanka macluumaadka dugsiga iyada oo loo marayo wicitaanada, qoraallada, emaylka iyo waraaqaha guriga. Tag mpls.k12.mn.us/school_messenger si aad u cusbooneysiiso dookhaaga xiriir.
BARO FURSADAHA AAD KAGA QAYB QAADAN KARTO WAXBARASHADA ILMAHAAGA.
Ka qayb qaado wax kasta oo adiga kuu shaqeeya: iskaa wax u qabso dugsiga; si joogto ah u akhriya joornaalka dugsiga; ka mid noqo Goob ama Golaha La-talinta Waalidka; ama wax u akhri ilmahaaga maalin kasta. Ka hubi iskuulkaaga wixii ku saabsan fursadaha ama aad bogga engagement.mpls.k12.mn.us.
XAQIIJI GAADIIDKA ARDAYGAAGA EE DUGSIGA.
Haddii aad xaq u leedahay gaadiidka baska, dhammaadka bisha Ogast waxaad ku heli doontaa ogeysiis iimayl iyo robocall oo ah halka joogsanyo baska ilmahaaga iyadoo lagu saleynayo cinwaanka gurigaaga. Haddii aad doorbideyso boosteejo bas oo ka duwan - sida cinwaanka daryeelka carruurta - fadlan la xiriir dugsigaaga.
BARASHADA KHADKA TOOSKA AH AYAA LAGA HELI KARAA K-12 IYADA OO LOO MARAYO ISKUULKA MPS ONLINE
MPS Online School waa ikhtiyaar nidaan cusub oo K-12 ah oo loogu talagalay ardayda iyo qoysaska doorbidaya barashada onleenka oo ay u arkeen in ardaygoodu gaareen guul badan qaabkaas. Ardaydu waxay dooran karaan MPS Online School xataa haddii ay horeba uga diiwaangashan yihiin dugsi kale dayrta 2021. Fiiro gaar ah: Marka arday lagu qoro MPS Online School, waxay waayi doonaan kursigooda MPS -koodii hore. Ma jiro waqti kama-dambays ah/oo goynta diiwaangelinta ah.
Dugsiga tooska ah ee MPS wuxuu bixiyaa fasalo taageero leh oo tayo sare leh meel kasta, iyo waqti kasta.
Cuntoyinka iskuulka ayaa la heli karaa.
Ardaydu waxay xaq u leeyihiin inay ku ciyaaraan isboorti loogu talagalay dugsiyada aaggooda loogu talagalay.
Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah ayaa la heli doonaa.
Adeegyada caafimaadka dhimirka ayaa la heli doonaa.
Dhammaan Waxbarshada Guud iyo Waxbarashada Gaarka ah Nidaamka Federaalka ee I iyo II waa la aqbali doonaa. Meelaynta ardayda ee Federal Seting III waxay u baahan doonaan inay maraan Waaxda Waxbarashada Gaarka ah. Faahfaahin intaas ka badan ka raadi: online.mpls.k12.mn.us/families.
La xiriir dugsigaaga marka hore wixii arimahaan ah. Haddii aad weli su’aalo dheeraad ah qabtid, la xiriir lambarada hoose:
Khadadka macluumaadka guud ee MPS: 612.668.0000
Su’aalaha ku saabsan halka ardaygaagu u aadayo dugsiga (Student Placement): 612.668.1840
Ubadkaaga u kaxaynta iyo ka soo celinta dugsiga (Transportation): 612.668.2300
Daryeelka ilmahaaga dugsiga ka hor iyo ka dib (Minneapolis Kids): 612.668.3890
Su’aalaha ku saabsan baahida caafimaad ee gaarka ah ee ilmahaaga (Health Services): 612.668.0850
Macluumaadka fasalka xanaanada kahor (Early Childhood Family Education): 612.668.2140
Su’aalaha ku saabsan baahida waxbarasho ee gaarka ah ee ardaygaaga (Associate Superintendents): 612.668.0140
Kheyraadka baahida qoyska ee aasaasiga ah (Family Resource Center): 612.668.4280
Cunnooyinka cunuggaaga ama ardaygaaga (Culinary and Wellness Services): 612.668.2820
Dooro qoraallada fariimaha inaad ka hesho MPS
Hubso inaad ka hesho xogta cusub ee muhiimka ah Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis adoo u diraya fariinta “Y” taleefanka 67587. Ha moogaanin macluumaadka ku saabsan xirnaanshaha dhismaha dugsiyada, amniga, dhacdooyinka, gaadiidka iyo waxyaabo kale oo badan. Wax dheeri ah ka baro bit.ly/MPStexts.
Ku Xirmo MPS
Wax badan ka ogoow dugsigaaga, arag sida loola xiriiro Adeegyada Diiwaangalinta Ardayda, adigoo ku dhammaystiraya waraaqaha diiwaangelinta dugsigaaga ExploreMPS.org
6 Ma jiro iskuulka (Labor Day)
7 Ma, jiro dugsi
8 Maalinta koowaad ee dugsiga Fasala da 1-12; Transition Plus (Bilawga dambe ee fasalada 10-12)
10 Maalinta koowaad ee dugsiga PreK iyo Xanaanada
20 Dugsi ma, jiro (Shirarka, ka fiiri faahfaa hinta dugsigaaga)
21-22 Ma,jiro iskuul (Fasaxa MEA)
5 Iskuul ma, jiro (dhamaadka rubuc)
24-26 Iskuul malaha (nasashada Thanksgiving)
20-31 Ma, jiro iskuul (Fasaxa Jiillaalka)
3 Maalinta koowaad ka dib fasaxa qaboobaha
17 Iskuul malaha (Maalinta MLK Jr.)
28 Iskuul malaha (dhamaadka rubuc)
21 Dugsi ma jiro (Maalinta Madax weyneyaasha)
22 Dugsi malaha (Shirarka, ka fiirso faah faahinta dugsigaaga)
Ma jiro taariikh degmada oo la keydinayo
1 Iskuul malaha (dhamaadka rubuc)
4-8 Iskuul ma, jiro (Guga nasashada)
30 Dugsi ma jiro (Maalinta Xusuusta)
9 Qalin jabintu way bilaabmaysaa (Taa riikhaha / wakhtiyada / goobaha ay ku kala duwan yihiin dugsiga sare)
10 Maalinta ugu dambeysa dugsiga (Dhammaan fasalada)
13-14 Maalmo suuragal ah maalmo dib loo gudayo
Juun 20-July 28 Waxbarashada Xagaaga